नेपाली श्रमिकको मृत्युबारे आयो डरलाग्दो विवरण ! | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार नेपाली श्रमिकको मृत्युबारे आयो डरलाग्दो विवरण !
नेपाली श्रमिकको मृत्युबारे आयो डरलाग्दो विवरण !
on: २६ बैशाख २०७५, बुधबार १७:०९ In: समाचारTags: No Comments
काठमाडौँ । सप्तरीका ४४ वर्षीय दशनराम मोची रोजगारीको सिलसिलामा दुबई गएको चार महिना नबित्दै परिवारले उनी लडेर घाइते भएको खबर पायो । घाइते भएको २४ घण्टामै उनको दुःखद निधन भयो ।
आफू काम गर्दै आएको निर्माण कम्पनीको भवनबाट लडेर घाइते हुनुभएका मोची गत असोज ३१ गते पहिलो पटक वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको थियो । गत माघ २२ गते घाइते भएपछि उपचारार्थ उनी दुबईकै अस्पतालमा भर्ना भए । चिकित्सकले उनलाई बचाउन सकेनन् । माघ २३ गते बिहान निधन हुनुभएका मोचीको शव नेपाल ल्याउन भने भण्डै तीन महिना लाग्यो । उहाँको शव गत चैत ४ गते मात्रै नेपाल ल्याउन सकियो ।
क्षतिपूर्तिका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा भेटिएकी उनकी शोकाकुल श्रीमती राजकुमारी राम भन्छन्, “शवसँगै कम्पनीले पठाएको मात्र रु चार हजारले किरिया खर्चसम्म पनि टरेन । कम्पनीले पहिलो महिनाको तलब पठाए पनि बाँकी महिनाको रकम अहिलेसम्म मेरो हातमा परेको छैन । पठाइएको छ भन्ने जवाफ मात्र पाएकी छुँ ।”
“भाइ त म¥यो अब भाइका छोराछोरीको मात्र चिन्ता छ,” मृतकका दाजु बिन्दश्री मोचीले भने, “विदेश जाँदा साहुसँग लिएको रु एक लाख ४० हजारको ब्याजसमेत तिर्न सकिएको छैन ।” भाइको मृत्युपछि भाइको परिवारको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा थपिएको उनले बताए ।
खरले छाएको घरबाहेक जग्गा जमीनको नाममा मृतकको परिवारको केही छैन । परिवारमा छ छोराछोरी र श्रीमती छन् । नेपालमा रहँदा मजदुरी गरेरै परिवार धानिरहेएका मोची सप्तरीकै अपरिचित तुनाराम भन्ने व्यक्तिको माध्यमबाट रोजगारीका लागि दुबई पुगेको थियो ।
त्यस्तै, चितवन जिल्ला कठाइकी २० वर्षीया विपना चौधरीले कहिल्यै पनि सोचेकी थिइनन् श्रीमान्सँग सदाका लागि बिछोडिन्छु भन्ने । पाँच वर्षअघि मात्रै प्रेम विवाह गर्नुभएकी चौधरीका पति आशिष चौधरी विवाहपछि पोखरामा गई ग्रिलसम्बन्धी काम गरिरहेको थियो । उक्त कामबाट परिवार धान्न पुग्ने भए पनि साउदी अरबमा रहनुभएका उनका काका आशारामले नेपालमा भन्दा विदेशमा राम्रो कमाइ हुने भनेपछि उहाँले उतै जाने सोच बनाउनुभयो । काकाले पनि उतैबाट प्रवेशाज्ञा पठाइ दिए र उनी कतार गए । तर, काम गर्न गएको डेढ वर्षमै उहाँले ज्यान गुमाउनुभयो । मृतकको दाबी रकम बुझ्न बोर्डमा आउनुभएकी मृतककी पत्नी चौधरीले भावुक बन्दै भने, “उनी बितेको खबर पाएको अघिल्लो रात हाम्रो फोनमा कुरा भएको थियो । अचानक बिहान उहाँको मृत्यु भयो भन्ने फोन आउँदा ममाथि आकाशै खसे जस्तो भयो ।”
श्रम कार्यालयले रोजगारदाता कम्पनीबाहेक अन्य माध्यमबाट रोजगारीका लागि विदेश नजान बेला बेलामा सूचनासमेत प्रकाशन गर्ने गर्छ । आफू जाने कम्पनीबारे बुझ्दै नबुझी र सूचनाको ख्यालै नगरी रोजगारीका लागि युवा विदेशिने गरेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीबाहेक अनधिकृत तवरले विदेश जानेहरु बढी दुर्घटनामा परेको घटना बाहिर आउने गरेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्वन बोर्डका सूचना अधिकारी पवित्रा घिमिरे खनालले बताए । “बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक श्रमिकका लागि तालीम दिने व्यवस्था गर्दै आएको भए पनि बिना तालीम नै उहाँहरु विदेश जानुहुन्छ,” उनले भने।
सबै स्थानीय तहमा सरकारी अस्पताल
सभामुख महरा र अमेरिकी राजदूत टेप्लिजबीचको भेटवार्तामा के भयो ?
२६ बैशाख २०७५, बुधबार १७:०९